Lionel Messi oo soo bandhigay maaliyadda saddexaad ee Kooxda Barcelona ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedkan 2020/2021 – Gool FM
(Barcelona) 07 Seb 2020. Kooxda Catalan ayaa shaaca ka qaaday maaliyaddeeda cusub ee saddexaad taasoo ay ku ciyaari doonto xilli ciyaareedka cusub.
Maaliyaddan oo midadbkeedu yahay casaan qafiif ah (pink) iyo Cagaar (green) oo ay koxoda Barcelona ku dheeli doonto fasal ciyaareedka 2020/2021, isla markaana ay farsameysay Nike ayaa la soo bandhigay waxaana soo bandhigisteeda ka qeyb qaata Lionel Messi.
Kooxda ayaa midabka maaliyaddaan Pink-ga ah horay u isticmaashay xilli ciyaareedkii 2017/18, waxayna ahayd maaliyeeda marka ay martida tahay ay ciyaarayeen.
Xiddiga maaliyaddaan cusub soo bandhigay, waxaa ka mid ah Kabtanka kooxda Barca ee Lionel Messi oo dhowaan sheegay inuu doonayo inuu ka tago Camp Nou, laakiin ugu dambeyn xaqiijiyey inuu sii joogi doono fasal ciyaareedka 2020/21.
Maaliyaddaan cusub ee saddexaad ayay taageerayaasha Barcelona baqaarrada kooxda ka heli doonaan, laga bilaabi 11 bishan September.
RASMI: Man City oo shaacisay in labo ka mid ah xidddigaheeda uu ku dhacay Korona Fayras